Asa fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Toerana lavitra andriana amin’ny resaka fampandrosoana ny fokontany Masiniloharano kaominina Antanimandry distrikan’Antsirabe faha-2. Vahoaka liana amin’ny fampandrosoana anefa ny ao an-toerana saingy ny mpitarika no tsy nisy hatramin’izay. Voaporofo tamin’ity fiaraha-mientana ny talata teo ity ny fahavitrihan’ireto mponina handray ny fivoarana. Olona miisa 115 no tonga niasa na dia filazana tsotsotra ihany aza no natao. Niandahy niambavy ny fitanana angady ary sarety dimy no nanampy tamin’ny fitaomana ny vato. Mampiaiky ny mpandeha ny haratsian’ity lalana ity teo aloha, indrindra amin’ny fotoam-pahavaratra. Ny sarety no voalaza fa mpanimba lalana, hany ka samy mibaby ny vokany avokoa ny tsirairay. Mizara roa tanteraka ny lalana noho ny fisiana lavaka lalina mampidi-doza mirefy iray metatra. Natao asa-tana-maro ny fanarenana izany ka vao manomboka dia roa kilaometatra sahady no vita tao anatin’ny tapak’andro maraina monja. Tanjona tokana fotsiny hoy i Jean Philibert Andriamiandrisoa, filoha mpitarika ny fokonolona sy ny zanaka am-pielezan’ny fokontany Masiniloharano, dia ny fampandrosoana maharitra ny tanàna. Diman-jato sy arivo isan’olona no fankasitrahana nomena ireto fokonolona nandray anjara navitrika sy tsy niraviravin-tanana. Hetsika efa fanao isan-taona moa izao fampiroboroboana ny ara-tsôsialy izao, saingy niavaka ny fahazotoan’ny tsirairay tamin’ity satria miankina tanteraka amin’ny fahatsaran’ny lalana hoy izy ireo ny fahaveloman’ny fokontany iray. Marihana fa eo an-dalam-pisavana ny lakan-drano manondraka ny fambolena ao an-toerana ihany ireo fokonolona ireo mandritra ity herinandro ity. Ankoatra izay, manana hetaheta maro samihafa ny mponina ao ary mbola mangataka fiaraha-miasa matotra amin’ny tomponandraiki-panjakana.
Betsaka ny zava-mahory
Mifototra amin’ny fambolena sy ny fiompiana ny fokontany ambanivohitra Masiniloharano. Olana goavana nosedrain’izy ireo ny fandalovan’ny rivo-doza sy ny orana be loatra tamin’ny fahavaratra ka maivana dia maivana araka izany ny vokatra azo. Somary nandamoka mihitsy aza hoy ny tantsaha iray ny sasany tamin’ireo karazam-pambolena toy ny tsaramaso sy ny katsaka. Ahiana hoy izy ireo fa tsy haharitra mandra-pahatongavan’ny taona manaraka ny sakafo ka voatery hividy ny ankamaroan’ny olona. Tapa-kevitra noho izany ny mponina fa hangataka fiaraha-miasa amin’ny fanjakana sy ny zanaka am-pielezana mba hitsinjovana ny fiainan’izy ireo. “Ny rano fisotro madio, ny fanampiana isa ny mpitsabo ao amin’ny tobim-pahasalamana ary ny fampidirana jiro ny fokontany Masiniloharano no mbola hetahetantsika”, ary ezahina ny hahatanteraka ireo fotodrafitrasa ireo, hoy ny nambaran’i Philibert Randriamiandrisoa filoha mpitarika tamin’ny lahateny nataony, ny talata 16 jiona teo. Vonona hanohy ny asa ireto fokonolona ireto araka ny valinteny nomen’izy ireo, saingy ny famatsiam-bola no voalaza fa miandry fotoana kely. Vao miandoha ny asa ka nanaovana antso avo ary nantitranterina sahady ny fanajana ny lalana mba hitoetra ela sy haharitra. Ny vahoaka ihany no migoka ny tombontsoa rehetra amin’izany, fa raha ny lalana hodiavina isan’andro no atao tsinontsinona, dia mampiditra angano amin’ny mpiara-belona no hiafarany ary ho foana ho azy ny fandrosoan’ny tanàna.